Dolphin semudzi muKDE, saka unogona kuiwana | Linux Addicts
Edza izvi kana yako KDE distro isingakutendere kuti umhanye Dolphin semudzi, zvakare inoshanda kuKate uye mamwe maapplication.
Pandinoshandisa Ubuntu (mudiki) kana iyo Raspberry Pi ine yayo yepamutemo inoshanda sisitimu, kunyangwe ini ndaisa iyo "sutu" ye Twister OS, kumhanyisa mameseji edhita kana maneja emafaira semushandisi wepamusoro kana mudzi zviri nyore: "sudo nautilus", semuenzaniso, inokwana. Asi izvi hazvina kudaro muKDE, kunyangwe zvave nemwedzi kubva ipapo vakativimbisa. tinofanira kukwanisa kushandisa dolphin semudzi sechikamu cheFrameworks 91 kuburitswa, asi hazvisati zvaita. Kunyangwe muKDE neon inotiudza kuti tishandise yakajairwa faira maneja uye ichatibvunza pasiwedhi pazvinenge zvichidikanwa, asi nenzira iyi dzimwe sarudzo hadzioneke mumenyu.
Chaizvoizvo, hazvidiwi 100%. Tinogona kuita shanduko dzese dzatinoda kubva kune terminal, asi ndinofunga hazvikuvadze kukwanisa kushandisa, zvirinani, Dolphin semudzi, uye kana isu tichigona kuita zvimwe chete naKate, saka zvese zviri nani. Chakavanzika chekuwana ichi ndechekuti ita kopi yepakutanga yekutanga uye shandura marongero ayo iyo inokuudza kuti zvichatanga sei, maitiro atinokuudza pazasi.
Dolphin semudzi ine modified .desktop faira
Nzira yacho iri nyore uye yakachengeteka. Chinhu "chine ngozi" ndicho chatinogona kuita mushure, sezvo kana tikabata zvatisingafaniri kubata tinogona kuita kuti chimwe chinhu chirege kushanda. Tinozviwana nenzira iyi:
Isu tinoenda kune usr/share/applications folda.
Ikoko isu tinotsvaga "dolphin", tinogona zvakare kutsvaga "kate" kana tichida kuita zvakafanana uye tinokwanisa kushandisa mupepeti semudzi. Faera reDolphin rinonzi org.kde.dolphin.desktop, uye Kate's org.kde.kate.desktop.
Tinoakopa kudesktop kuti tigadzirise kana kuti zvakananga kwaachazoguma, ndiko kuti, mune yedu personal/.local/share/applications forodha.
Isu tinovhura iyo .desktop faira naKate, semuenzaniso, uye kuigadzirisa. Iwe unofanirwa kugadzirisa kanenge mutsara mumwe, asi zvinokurudzirwa kugadzirisa maviri kana matatu:
Mumutsara painoti "exec" isu tinoshandura izvo zviri mushure mechiratidzo chakaenzana (=) kune ichi pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY KDE_SESSION_VERSION=5 KDE_FULL_SESSION=yechokwadi dbus-launch dolphin %u panyaya yeDolphin uye iyi pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY KDE_SESSION_VERSION=5 KDE_FULL_SESSION=yechokwadi dbus-kutanga kate -b %U munyaya yaKate. Kana isu tichida kuita izvi neimwe imwe app, isu tinongofanira kushandura magumo, kubva panoonekwa zita rekushandisa kusvika kumagumo. MuDophin ndizvo dolphin %u, inova iyo yekutanga application.
Iro zita reapp rakakodzera kuchinja kuita senge Dolphin Root uye Kate Root. Iri ndiro zita richaonekwa muapp launcher.
Tinokwanisawo kuenda kuzita (zita) nekutaura (comment) yemutauro wedu tochinja.
Dai takavasiya mune yedu yega/.local/share/applications forodha, maapplications anofanira kunge atoonekwa mumaapps menu. Tinofanira kuisa password yedu kuti tikwanise kuvhura maapplication nenzira iyi.
Iyi ingori nzira yekudimbudzira kune chimwe chinhu chinofanira kushanda kubvira Framework 91, asi hey, kune avo vanoida uye vanoda kuzviita nemushandisi interface, izvi zvinogoneka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Edza izvi kana yako KDE distro isingakutendere kuti umhanye Dolphin semudzi, zvakare inoshanda kuKate uye mamwe maapplication.
Uye mubvunzo wangu ndeuyu unotevera: chii chinodiwa chekushandura madesktops uye kumanikidza maraibhurari mumadhiraivha kana chinhu chekutanga chaunokurudzirwa neiyo distros ndeichi: siya padesktop nekukasira kuti udzivise kusapindirana kwezvinetso nemashandisirwo?
Kune yangu yakaderera-yekupedzisira laptop ndinoshandisa xubuntu uye yangu Ryzen 5 3400G uye 16Gb RAM ini ndinoshandisa Ubuntu neiyo default desktop. Uye kwete zvakanyanya, hei…. uye pasina kutemwa nemusoro.
Iyi nhau inoonekwa nevanhu vanoda kana vanofarira kuchinja kuLinux…. uye anomhanya neimwe nzira. Uye isu tinonyunyuta kuti mubhadharo weLinux wakanyanya kuderera.
Mumwe munhu tarisa rezinesi reLinux remukomana uyu.
Nachete, tinozviita nokuti tinogona, uye kana tichizozvigadzirisa pane zvatinonyora nokuti vashandisi vekufungidzira vanogona kutya, zviri nani kuchinja munda uye kutanga kunyora nezve origami.
Ndinofanira kunge ndarasikirwa nechimwe chinhu kana Linux ichikurudzira kusiya zvinhu sezvazviri, kana rimwe remasimba ayo nderekuti unogona kushandura zvese.
Nekune rumwe rutivi, zvinotsanangurwa pano hazvibate madhesiki kana zvitoro zvemabhuku; unoita kopi yekuvhura yemamwe maapplication kuti avhure nemvumo dzese. Uye HAUBATI mbavarira yepakutanga (.desktop).
Sergio anobva kuArgentina akadaro
inoita 11 maawa
Me dio resultado, excelente. Atenti que la primera vez me cambió la resolución de la pantalla, pero no volvió a ocurrir
Pindura Sergio anobva kuArgentina
CoreBoot 4.16 inosvika nerutsigiro rwemabhodhi matsva makumi matatu nematatu nezvimwe
Manjaro 2022-02-27 inosvika iine GNOME 41.4 uye Plasma 5.24.2 sezvitsva zvakatanhamara.